Sithakaselwe iSithangami sokuhlomisa osomabhizinisi - Bayede News
Ukhala uyazithulisa ‘ubhululu’ wesikhulu ehhovisi likaNdunankulu
“IMINYAKA engamashumi amabili ezayo kumele kube ngeyokuthi abohlanga bayahlomula emnothweni wakuleli.” Lawa ngamazwi aphinyiswe ngumshicileli weBAYEDE, uMnu Nhlanhla Mtaka
Lapha uMtaka ubexoxa nomsakazi woKhozi FM, uNkk Dudu Khoza, lapho abechaza khona ubumqoka beSithangani ekuhlomiseni osomabhizinisi bendawo.
Uhlelo lweSithangami oluqalwe yi-BAYEDE luyinkundla lapho abaholi nomphakathi becobelelana khona ngolwazi olunzulu ezindabeni ezithinta ukusebenza kukahulumeni, ukwakhiwa komthetho, intuthuko yasemakhaya kanye nokuthuthukiswa kosomabhizinisi bendawo. Selokhu saqala iSithangami sesekwa yisikhondlakhondla somsakazo uKhozi FM, yisikhungo esilekelela osomabhizinisi abasakhasayo i-SEDA kanye nenhlangano ebhekelele ukhetho kuleli i-Independent Electoral Commission.
Ngonyaka odlule iSithangami, okokuqala ngqa, sibe yingxenye yezinhlelo eziwuchungechunge zoKhozi FM , iNyus’ iVolume ebihambela omasipala abehlukene KwaZulu-Natal. Ephawula ngalokhu, loyo ongumphathi wesiteshi uMnu Bonga Mpanza uthe: “Ukufaka kwethu iSithangami ezinhlelweni zeNyus’ iVolume sikubona kube wumqondo ophusile ngoba njengomsakazo asifisi ukuthi abalaleli bethu bajabule nje kuphela ngoba kunabaculi abadumile kepha siyafisa futhi ukuthi khona lapho bathole ulwazi ngokwenzeka ezweni nasemhlabeni jikelele.”
UMnu Mpanza uqhubeke wathi: “NjengoKhozi FM sizibophezele ekuqinisekiseni ukuthi uhlelo lweSithangami lusabalala izwe lonke ngoba kasingabazi ukuthi kukhulu abalaleli bethu abazokuzuza ngalo.”
Ongumphathi we-SEDA KwaZulu-Natal, uMnu Lindani Dhlomo, yena uphawule kanje: “Njenge-SEDA kusithokozise kakhulu ukuba yingxenye yeSithangami ngoba sithola ithuba elimqoka lokuthi sidlulise ngolwazi kosomabhizinisi ngolimi lwabo, nokuyinto emqoka kakhulu.”
ISithangami sihambele omasipala abathathu ngenyanga kaZibandlela nokuyilapho sihlangane khona nosomabhizinisi bendawo nabathokozele kakhulu ukuthola ithuba lokunikezwa ulwazi ngamabhizinisi ngolimi lwabo. Omasipala abahanjelwe kube yiNkandla, uMsunduzi kanjalo nesifunda iHarry Gwala.
Ngokusho kwesikhulu sephephandaba iBAYEDE, uMnu uLethu Tembe, u-2015 uzoba nezithangami eziningana ngenxa yesasasa elibe khona ngonyaka ophelile. “Into (iSithangami) esayiqala njengento ezoba njalo emuva kwezinyanga ezintathu manje isizoba nyanga zonke ngenxa yesasasa. Ngokuphela kukaNhlolanja sizokwethula uhlelo lwaminyaka wonke nalapho abafundi bezothola ithuba lokubhalisela ukuba yingxenye yezithangami ngalapho behlala ngakhona,” kusho uMnu uTembe.